Goynta Laser ee Dharka Dijital-Sublimation Daabacaadda Digital - Laser Dahab ah
Jarida Laser ee Dharka Dijital ah ee Dheeh-Sublimation Daabacan
Si habsami leh ayey u buuxiyaan shuruudaha jarista dharka daabacan iyo dharka
Maalmahan tiknoolajiyada daabacaadda waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa warshadaha kala duwan sida dharka isboortiga, dharka dabbaasha, dharka, boorarka, calammada, iyo calaamadaha jilicsan. Nidaamyada daabacaadda dharka daabacan ee maanta ayaa u baahan xitaa xalal goyn deg deg ah.
Waa maxay xalka ugu fiican ee jarista dharka daabacan iyo dharka?Dhaqdhaqaaqa gacanta ama goynta farsamada ayaa leh xaddidaadyo badan. Goynta laser-ka ayaa noqda xalka ugu fiican ee goynta dusha sare ee sublimation dheeha daabacan dharka sublimation iyo dharka.
Xalka goynta laser-ka aragga ee Goldenlaser automates geedi socodka jarida sublimation dheeh qaabab daabacan oo dhar ama dhar si dhakhso ah oo sax ah, si otomaatig ah u magdhabaya wixii qalloocinaya ama kala bixid ah ee ku dhaca xasiloonida ama kala go 'dharka.
Kaamirooyinka ayaa baaraya dharka, ogaanaya oo aqoonsanaya dusha daabacan, ama soo qaadaysa calaamadaha diiwaangelinta la daabacay ka dibna mashiinka laser-ka ayaa jaraya naqshadaha la doortay. Geedi socodka oo dhan waa si buuxda otomaatig ah.
Faa'iidooyinka jarista dharka dheeh-hoosaadka leh nidaamkeena aragtida leysarka?
Si sax ah oo xasaasi ah si toos ah uga jar duub
Si fudud loo hawlgalo - Si otomaatig ah u aqoonsado dusha daabacan
Hawlgal debecsan - Naqshad kasta iyo cabbir kasta oo amar ah
Isku-darka geesaha jarista - Dharka polyester-ka wax lagu karsado ee kulul
Ka baaraandeg la'aanta aan lala xiriirin - Majiro dhar
Warshadaha ugu muhiimsan ee codsiyada daabacaadda dharka dhijitaalka ah ee ku habboon goynta laser
Maaliyadaha isboortiga ee dharka laastikada, dharka dabbaasha, dharka baaskiilka, dharka kooxda, dharka orodka, iwm.
Lebbiska, dharka Yoga, funaanadaha isboortiga, gaagaaban, iwm.
Calaamadaha & Balastarrada
Waraaqaha twill, astaamaha. tirooyinka, sumadaha iyo sawirada, iwm.
Wixii funaanad, funaanad polo ah, funaanado, dharka, goonooyinka, gaagaaban, funaanado, maaskaro wejiga, garbasaarrada, iwm.
Calaamadaha, calammada, bandhigyada, gadaal bandhigyada, iwm.
Teendhooyinka, shiraacyada, gogosha, miisaska la tuuro, buufinta iyo daawadayaasha, iwm.
Dharka, qurxinta, barkimooyinka, daahyada, gogosha sariirta, marada miiska, iwm.
Talooyinka Mashiinka Laser
Waxaan kugula talineynaa mashiinada goynta laser-ka soo socda ee dheeh sublimation dhar daabacan iyo goynta dharka
Vision Scanning Laser Goynta Machine
Independent Madaxa Labaad Vision Camera Laser magaabay
Mashiinka Goynta Laser Qaabka Wide ee Calanka, Boorarka, Calaamadaha jilicsan